Investment Compensation Fund | FXCC inhengo ye ICF
musha / About / Nei FXCC / Client Money Protection
FXCC yakagara ichizvipira kune yakakwirira kupfuura yepamutemo yepamutemo yepamutemo, uye yakagara iri kutarisa kupa rugare rwakakwana rwepfungwa kune vatengesi vedu, pose pavanoshambadzira uye pose pavanenge vari. Saka, nekuda kwenyika yedu kusvika kune dzimwe nyika dzakabuda, kambani yakagadzirisa kuti mutemo wayo unobvumirana nemitemo inodikanwa kwete kwete yeEurope chete, asiwo yepasi rose.
Nzira dzakawanda dzinogamuchirwa neFXCC dzinopfuura zvinotarisirwa pamutemo zvinotarisirwa kushanda munyika dzakasiyana-siyana. Tinoita izvi kuitira kupa vatengi vedu nenyaradzo yese uye chivimbo, kuitira kuti nguva dzose tinzwe takachengeteka zvakakwana mukubata kwavo nesu.
Nebhizimisi redu rekutsvaga, kubudirira kwedu kunobatanidza zvakananga nevatengi vedu kubudirira, uye kuburikidza nekuvimba nekunzwisisika, kuva maitiro edu emitemo, tinotarisira kuvaka ukama hwakasimba navatengi vedu, nguva dzose vane ruzivo rwavo rwakanakisisa mupfungwa.
Kupa kuchengetedza ndiyo chinangwa chedu
Kuchengetedzwa uye kuongorora
FXCC inovimbisa kuchengetedzwa uye kuchengeteka kwevatengi vedu makambani ekutengeserana. Uyezve, zvikumbiro zvemari zvose zvakanyatsoongororwa kuitira kuti ivhu richengetedzwe kuchengetedza uye kuratidza kushanda zvakanaka.
Rinodzorwa uye Rinorayirwa
Kuva mutengesi akachengetedzwa uye akachengetedzwa zvakakwana kubva ku2010, tinozvipira kurapa vateereri vedu nenzira yakajeka pakuisa kupa vatengi kuchengetedzwa nekuchengetedzwa kwekutengesa.
Kuvimba uye Kuziva
Kushandira pamwe kwakabudirira uye kwenguva refu kunovakirwa pane kuvimba. Nechinangwa chekutengeserana nevatengesi vatengesi vaitsvaga, kuti vawane ruremekedzo uye kuvimba kwevatengi vedu, nokudaro vanovimbisa kufarira kwavo kwakanakisisa, FXCC inoshanda pane imwe yechokwadi ye STP / ECN model. Nokuita kudaro, tinoratidzira kuve pachena uye hapana kupesana kwechido.
Ne-state-of-it-yakachengeteka Secure Sockets Layer (SSL) yenhungetedzo yeprotocol protocol, ruzivo rwevadzidzi rwedu rwevamwe rwuri kuchengetedzwa.
FXCC inogara ichitsanangura, inotarisa uye inodzora rudzi rwemhando ipi yengozi inobatanidzwa nemabasa ayo.
Client Fund Kusarura
Vose mari yevashandi vanobatwa mumakondani akaparadzaniswa, zvakaparadzana zvachose kubva kune imwe uye iyo yose FXCC dzekambani dzekambani.
Kutungamirira International Banking
Sezvo isu takazvitsaurirwa kuti mari yedu yekwereti ive yakachengeteka, inodzivirirwa muLeading International mabhengi.